[APK] [Unreleased] Ngwa "Weather" ngwa maka beta beta nke mara ezigbo mma | Gam akporosis
[APK] [Unreleased] Ngwa nke «El Tiempo» maka beta testers nke mara ezigbo mma
Na m na-achọ ya kwa ụbọchị XDA Ndị mmepe mmepe, taa m zutere ihe ịkọ amụma «Oge ", nke ugbu a anaghị ebipụta na Playlọ Ahịa Google, ụlọ ọrụ ngwa ngwa maka gam akporo, mana eziokwu ga-agwa ya na ọ dị ezigbo mma.
Ngwa nke yiri ka edoziri ya iji wụnye ya na teknụzụ ya na igwe ya na teknụzụ AMOLED n'ihi ya mara mma gwụchara na ụda ojii dị ọcha nke na-agbakwunye mmetụ nke ịdị mma na ọdịiche, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ngwa kachasị mma nke oge ahụ enwere m obi ụtọ ịnwa na njedebe nke gam akporo m. Mgbe ahụ na ọkwa na-esote m kọwaa otu esi ebudata ngwa a site na Storelọ Ahịa Play n'onwe ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ ka bụ mbipute a na-edeghị ma ọ bụ mbipute a na-ebipụtaghị.
1 Mana gịnị Taa Weather na-enye anyị?
2 Kedu ka m ga-esi nweta ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ebipụtaghị ya na Playlọ Ahịa Google?
3 Osisi Osisi Weather Taa
Mana gịnị Taa Weather na-enye anyị?
Ọrụ interface dị ọcha nwa risịrị na-enye ya a nnọọ, mara mma aka.
Ozi nkenke, ihe doro anya na ihu igwe doro anya site na ebe ọ bụla n'ụwa.
Ohere nke ịgbakwunye ọtụtụ obodo dịka anyị chọrọ.
Ọnọdụ nke ọnọdụ anyị maka ozi akpaka na ihu igwe dị ugbu a na amụma ndị na-abịanụ.
Bọchị ọ bụla a mara mma foto na nkụnye eji isi mee nke ngwa.
Ozi banyere ogo ikuku na ntinye UV.
Mpịakọta ihe ọmụma banyere ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, visibiliti, isi igirigi, nrụgide ikuku, ikuku ikuku na ụzọ.
Mara mma Wijetị maka ngwa na nkenke ọmụma si anyị gam akporo si n'ụlọ ihuenyo.
Notma Ọkwa nke amụma ihu igwe.
Oké ihu igwe njikere.
Kedu ka m ga-esi nweta ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ebipụtaghị ya na Playlọ Ahịa Google?
Iji nweta ngwa ahụ agbasabeghị na Weatherbọchị taa, a mara mma ngwa nke "Oge" maka gam akporo, naanị ihe anyị ga-eme bụ pịa njikọ a nke m ga-ahapụ n'okpuru usoro ndị a ma ọ bụ nyochaa koodu QR dị na ya. Mgbe ahụ ị ga - pịa bọtịnụ ntinye iji rịọ ka isonye na mmemme beta Weather iji nwee ike ibudata ngwa ahụ na ngwa gam akporo n'onwe ya.
Ọ bụrụ na ngwa ahụ apụtaghị na Playlọ Ahịa Google, ị nwere ike mgbe niile ibudata ngwa site na njikọ ndị a o iningomi QR koodu m gha ahapuru gi n'okpuru akara ndia.
Osisi Osisi Weather Taa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] [Unreleased] Ngwa nke «El Tiempo» maka beta testers nke mara ezigbo mma
Naanị ihe dị mkpa bụ na data ihu igwe na-enye ndị ọzọ
Ha bụ ehi.
Arụnyere na-enwe ebube na nchịkọta akụkọ na-ekpughe ... uninstalled mgbe 5 sekọnd ... App nke ụyọkọ na iOS interface merụsịrị na-emegharị ka gam akporo ọkọlọtọ. Ihe nkwado, enweghị okwu.
All ukara ọmụma banyere Galaxy S8 na S8 + na-abịa ìhè
Leaked ọhụrụ ikpe na ngwa maka Samsung Galaxy S8